အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Feb 20, 2011
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, February 20, 2011 Sunday, February 20, 2011 Labels: ဘာသာပြန် ခံစားမှု ၀တ္ထုများ
တုတ်ကောက် အဖြူရောင်လေးကို လက်ကကိုင်ပြီး စမ်းကာစမ်းကာနဲ့ ကားပေါ်ကို တက်လာတဲ့ ဆူဆန်ကို ဘတ်စ်ကားပေါ်က ခရီးသည်တွေက စာနာသနားတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်လို့ နေကြပါတယ်… သူမက အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး ချောမောလှပ ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ မိန်းခလေး တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကိုယ်လုံး ခပ်သွယ်သွယ်လေးနဲ့ အ၀တ်အစားကိုလည်း စမတ်ကျကျ ၀တ်ဆင်ထားတာကြောင့် ကြည့်ရတာ ရှင်းသန့်ကြော့မော့လို့ နေပါတယ်။ ကားပေါ်ရောက်တော့ ကားမောင်းတဲ့လူကို ပိုက်ဆံ လှမ်းပေးလိုက်ပြီး သူ့လက်တွေနဲ့လိုက်စမ်းရင်း ခုံနေရာလွတ်ကို ရှာဖွေပါတယ်။ လူမရှိတဲ့ ထိုင်ခုံလွတ် တစ်ခုကိုတွေ့တော့ သူမက ထိုခုံလေးမှာ ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကိုင်လာတဲ့ လက်ဆွဲအိတ်ကို ပေါင်ပေါ် တင်လိုက်ကာ တုတ်ကောက်လေးကိုတော့ ခုံဘေးနားမှာ ထောင်ထား လိုက်ပါတယ်..
ဆူဆန်ဟာ ချောမောလှပပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ မျက်စိ မမြင်ရှာသူ တစ်ယောက်ပါ… လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်မှာ သူမ နေမကောင်းဖြစ်တော့ မှားယွင်းတဲ့ ဆေးကုသမှုတစ်ခုကြောင့် မျက်စိ ၂ဘက်လုံး ကွယ်သွားတဲ့ ဘ၀ကို ရောက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ အဲဒီချိန်က စလို့ ဆူဆန်ရဲ့ ဘ၀ဟာ မဲမှောင် အေးခဲနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲကို ပစ်ချခံလိုက် ရသလို ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီး ဘ၀ကို နာကျည်းတဲ့စိတ်တွေ၊ မုန်းတီး အားငယ်မှုတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယူကြုံးမရ၊ သနားမိတဲ့ စိတ်တွေ၊ ဒေါသတွေနဲ့ ပူလောင် နေခဲ့ရပါတယ်.. နောက်ဆုံးတော့ သူ့ဘ၀၊ သူ့အနာဂတ် တစ်ခုလုံးဟာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မတ်ခ်ကိုသာ လုံးလုံး မှီခိုအားကိုးဖို့သာ ရှိပါတော့တယ်…
မတ်ခ်ဟာ လေတပ် အရာရှိတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ဆူဆန့်ကိုလဲ အလွန်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးပါတယ်… သူမ မျက်စိ အမြင်အာရုံ ပျောက်ကွယ်သွားတော့ ဆူဆန်စိတ်ဓာတ်တွေ ပြန်လည် ကောင်းမွန် တက်ကြွလာအောင်၊ သူမ အားမငယ်အောင်၊ အမှီအခို ကင်းကင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည် ရပ်တည်လာနိုင်အောင်၊ ဂရုတစိုက်နဲ့ အစွမ်းကုန် ကူညီဖေးမပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်.. ဆူဆန် ပြန်လည် ကျန်းမာ သန်စွမ်းလာတဲ့ အချိန်မှာ သူမနဲ့ သင့်လျှော်မဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုကို အဆင်သင့် ထားရှိပေးဖို့ ဆူဆန်ရဲ့ အရင်အလုပ်ရှင်ထံမှာ သွားရောက် တောင်းဆို ပေးထားခဲ့ပါတယ်။
မတ်ခ်ရဲ့ ဂရုစိုက် ပြုစုယုယမှုတို့ကြောင့် ဆူဆန်ဟာ အလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့အထိ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ တဖြေးဖြေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာခဲ့တယ်.. တဖြေးဖြေးနဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ကြံ့ခိုင် လာပါပြီ.. ဒါပေမဲ့ မျက်စိမမြင်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်ကို ဘယ်လိုသွားမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါပြီ.. အရင်ကတော့ သူမဟာ အလုပ်ကို ဘတ်စ်ကားနဲ့ အမြဲသွားခဲ့ပါတယ်.. ခုချိန်မှာတော့ ဘတ်စ်ကားစီးဖို့ဆိုတာ သူမ တစ်ယောက်တည်း အတွက်တော့ အတော့်ကို ထိတ်လန့် စိုးရိမ်စရာပါ… ဒါပေမဲ့ အလုပ်ဝင်ချိန်မှာတော့ မတ်ခ်က သူ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာနဲ့ ဆူဆန် အလုပ်သွားရမဲ့ နေရာဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေပေမဲ့လို့ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ဆူဆန့်ကို ကားမောင်းပြီး အရင်လိုက်ပို့ပါတယ်.. ပြီးတော့မှ သူ့အလုပ်ရှိရာကို ပြန်သွားပါတယ်။ ညနေ အလုပ်ဆင်းချိန်မှာလည်း မတ်ခ်က ဂရုတစိုက် ပြန်လာကြိုပါတယ်.. အဲဒီလို မတ်ခ်ရဲ့ ဂရုစိုက်မှု၊ အကာအကွယ်ပေးမှု၊ စိတ်လက်ရှည်စွာနဲ့ စောင့်ရှောက်ပေးမှု တွေအတွက် ဆူဆန်ကလည်း ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ခြင်း များစွာနဲ့ မတ်ခ်ကို ပိုလို့ အားကိုးချစ်ခင် မိရပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ အလုပ်မှာ အသားကျလာပြီး သိပ်မကြာခင်မှာတော့ ဘတ်စ်ကားနဲ့ပဲ အလုပ်ကိုသွားဖို့ မတ်ခ်က ဆူဆန့်ကို တိုက်တွန်းလာပါတယ်.. မတ်ခ်ရဲ့စကားကို ကြားတော့ ဆူဆန်က သိပ်ကို ဒေါသဖြစ်မိပါတယ်. “သူမလို အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးထားရသူက အပြင်ကို ဘယ်လိုများ တစ်ယောက်တည်း သွားနိုင်မှာတဲ့လဲ… ဒါကို မတ်ခ်က မစဉ်းစားမိဘူးလား၊ သူမကို ခုလို အလိုက်သွားပြန် ကြိုပို့လုပ်နေတာ ငြီးငွေ့ပြီလား၊ ပင်ပန်းတယ်လို့ ထင်နေပြီလား၊ သူ တာဝန်မယူချင်တော့ဘူးလား” လို့ စိတ်ထဲက တွေးမိရင်း ၀မ်းနည်း ဒေါသတွေ ဖြစ်လာရပါတော့တယ်… ဒါကြောင့်လဲ ဆူဆန်က မတ်ခ်ကို ခါးခါးသီးသီးနဲ့ ပြင်းထန်စွာ ပြောလိုက်မိပါတယ်။
“ကျွန်မက အကန်းလေ၊ အကန်းတစ်ယောက်က ဘယ်နေရာကို ဘယ်လို သွားရမယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိနိုင်မှာလဲ.. ရှင်က ကျွန်မကို အခုလို ကြိုပို့ လုပ်ပေးရတာ၊ တာဝန် ယူရတာ ငြီးငွေ့ပြီလား… မပို့ပေးချင်တော့ဘူးလား၊ ကျွန်မထင်တာတော့ ရှင် ကျွန်မကို စွန့်ပစ်ချင်နေပြီ မဟုတ်လား ၊ ရှင်တို့ယောက်ျားတွေက ဒီလိုပါဘဲ။ ကြာလာရင် စိတ်မရှည်တော့ဘူး၊ အကြင်နာတွေလည်း လျော့လာကြပြီ၊ ငြီးငွေ့လာကြပြီ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား၊”
ဆူဆန့်ရဲ့ ခါးခါးသီးသီး စကားလုံးက မတ်ခ်ရဲ့ ရင်ထဲကို နင့်ခနဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်.. ခက်ထန်လှတဲ့ ဆူဆန့်လေသံက သူ့ကို စိတ်ထိခိုက် ကြေကွဲစေပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူ ဆူဆန့်ကို ဘာမှ တုံ့ပြန် မပြောတော့ပါဘူးး… သူ့အနေနဲ့ ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာ သူသိပြီးသားပါ.. သူက မနက်ခင်းတိုင်း ဆူဆန်နဲ့ အတူတူ ဘတ်စ်ကား လိုက်စီးမဲ့အကြောင်းနဲ့၊ ညနေဆို သူ့ကားနဲ့ ပြန်လာကြိုမဲ့ အကြောင်း ဆူဆန့်ကို ကတိပေးပါတယ်.. ပြီးတော့လဲ အလုပ်ကို ဆူဆန် တစ်ယောက်တည်း ဘတ်စ်ကားနဲ့ မသွားနိုင်မချင်း ဘယ်လောက်ကြာကြာ သူလိုက်ပို့ပါ့မယ် ဆိုတာပါ ကတိပေးပါတယ်။
တကယ်လဲ မတ်ခ်ဟာ သူ့ လေတပ် ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး မနက်ခင်းတိုင်း ဆူဆန်နဲ့အတူတူ ဘတ်စ်ကား လိုက်စီးပေးပါတယ်…. မျက်စိမမြင်ရပေမဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လို အာရုံစူးစိုက်ရမယ်၊ မှတ်သားရမယ်ဆိုတာ ဆူဆန့်ကို သင်ပြပေးပါတယ်.. အထူးသဖြင့် အကြား အာရုံကို အသုံးချဖို့ ပြောပြပါတယ်.. အသံကို နားထောင်ပြီး သူမ ဘယ်နေရာကို ရောက်နေပြီ.. ဘယ်လို ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေပြီဆိုတာကို မှန်းဆတတ်အောင်၊ ဆုံးဖြတ် တတ်အောင် ဂရုတစိုက် ရှင်းလင်း ပြောပြပါတယ်.. ဘတ်စ်ကားစီးတဲ့ အခါမှာလည်း မတ်ခ်ဟာ ဆူဆန့်အတွက် ထိုင်စရာ ခုံနေရာကို ရှာပေးပြီး သူကတော့ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ကားမောင်းသူရဲ့ အနောက်နားကနေ ဆူဆန့်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး လိုက်ပါလာတတ်ပါတယ်..
အဲဒီလိုနဲ့ လမ်းတွေကို ဆူဆန့်အာရုံထဲမှာ မှတ်မိလာနိုင်ပြီလို့ ယူဆရတဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ သူမတစ်ယောက်တည်း ဘတ်စ်ကားစစီးဖို့ ဆူဆန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်.. တစ်ယောက်တည်း ကားစစီးမဲ့ တနင်္လာနေ့ မနက်ခင်းရောက်တော့ အိမ်က မထွက်ခင်မှာ ဆူဆန်က သူမရဲ့ ယာယီ ဘတ်စ်ကား စီးဖော်၊ သူမရဲ့ ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်း၊ သူမရဲ့ အကောင်းဆုံး ၊ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေလဲဖြစ်တဲ့ မတ်ခ်ကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး နုတ်ဆက်စကားကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်.. ဘာလို့ဆို သူမက တစ်ယောက်တည်း အလုပ်ကို သွားရတော့မှာ ဖြစ်လို့လေ၊ ခါတိုင်း ၂ယောက်အတူ သွားနေရာကနေ အခုတစ်ယောက်တည်း သွားရတော့မယ်ဆိုတော့ အားတော့ငယ်တာ အမှန်၊ ဒါပေမဲ့ သူမကိုယ် သူမ အားကိုးဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့လည်း ဆူဆန်က တွေးမိပါတယ်.. အိမ်က မထွက်ခင် နှုတ်ဆက်စကားဆိုတဲ့ ဆူဆန်ရဲ့ မျက်ဝန်းထဲမှာ မျက်ရည်ကြည်လေးတစ်ချို့တောင် ရစ်သိုင်းနေလေရဲ့။
ပထမဦးဆုံးနေ့ တစ်ယောက်တည်း အလုပ်သွားရပေမဲ့ အရာအားလုံး ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းနဲ့ အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်.. သူမဟာ ဘတ်စ်ကားကို တစ်ယောက်လည်း စီးနိုင်ခဲ့ပြီး အလုပ်ကို ချောချောမွေ့မွေ့ဘဲ ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး…. နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ဆူဆန်အလုပ်ကို အဆင်ပြေစွာ သွားနိုင်ခဲ့တယ်.. သူမရင်ထဲမှာလည်း ခါးသီးစိတ်၊ ၀မ်းနည်းစိတ်တွေ၊ လောကကြီးကို မကျေနပ်စိတ်တွေလဲ မဖြစ်မိတော့ပါဘူး.. သူမ ကိုယ့်အား ကိုယ် ကိုးနိုင်ခဲ့ပြီ.. အလုပ်ကို သူမ ဖာသာ သွားနိုင်ခဲ့ပြီလေ။ သူများကို အားမကိုးရဘဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်လို့ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ ကျေနပ်ပီတိဟာ သိပ်ကို ချိုမြိန်မှန်းလည်း သူမ နားလည်ခဲ့ပါပြီ။
တစ်ယောက်တည်း သွားနေရတာ အသားကျလာပြီး ရက်နည်းနည်းရလာတဲ့ တစ်ခုသော မနက်ခင်းမှာ ခါတိုင်းလို ဘတ်စ်ကားစီးပြီး အလုပ်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်.. ရုံးနားက သူမ ဆင်းနေကျ နေရာ ရောက်တော့ ကားပေါ်ကဆင်းဖို့ ပြင်လိုက်ပါတယ်…. အဲဒီချိန်လေးမှာ ကားမောင်းသူ ဦးလေးကြီးက သူမ မထင်မှတ်ထားတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကို လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်…
“သမီးရေ.. ဦးလေးတော့ မင်းကို အားကျ မိပါရဲ့..” တဲ့။
ဒီစကားကြားတော့ ဆူဆန် သူ့နားသူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်မိတယ်.. သူမကို ပြောတယ်လို့တောင် မထင်မိဘူး.. သူမလို မျက်စိမမြင်တဲ့သူ၊ ဘ၀ကို အဆင်ပြေအောင် မနည်း ကြိုးစား နေထိုင်နေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အမြင်အာရုံ ကောင်းနေသူတွေက အားကျတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား၊ သူမရဲ့ ဘ၀ကို ဘယ်လိုလူကများ အားကျနိုင်မှာပါလိမ့်.. လို့ တွေးမိကာ သိလိုစိတ်၊ ထူးဆန်း အံ့သြစိတ်နဲ့ ဆူဆန်က ကားမောင်းသူကို ပြန်မေးမိပါတယ်..
“အားကျတယ် ဆိုတာ ကျွန်မကို ပြောတာလားရှင်။ ဘာကြောင့်များ ကျွန်မကို အားကျတယ်လို့ ပြောရတာလဲရှင်…”
သူမ အမေးကို ဦးလေးကြီးက ပြန်ဖြေပါတယ်..
“အော် သမီးကို အမြဲတမ်း ဂရုတစိုက်နဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေး၊ ပူပန် စောင့်ကြည့်ပေးမဲ့ လူ တစ်ယောက် ရှိနေတာ၊ တွေ့မြင်နေရတာကို သဘောကျမိလို့ပါကွယ်.” တဲ့
မမြင်ရပေမဲ့ မျက်မှောင်လေး ကျုံ့လိုက်ပြီး ဆူဆန်က ဦးလေးကြီးကို “ဦးလေး ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ..”
လို့ နားမလည်နိုင်စွာ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်..
“အော် သမီးကတော့ ဘယ်သတိထားမိမလဲလေ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက် သမီး ကားစစီး ကတည်းက လေတပ် ယူနီဖောင်း ၀တ်ထားတဲ့ ခန့်ခန့် ညားညား လူတစ်ယောက်က ဟိုဘက်လမ်းထောင့်မှာ ရပ်ပြီး သမီး ကားပေါ်က ဆင်းတာကို အမြဲတမ်း စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်.. သမီး ကားလမ်းကို ဖြတ်ကူးပြီး ရုံးထဲကို ၀င်သွားပြီ ၊ စိတ်ချရပြီ ဆိုတော့မှ သမီးမမြင်မှန်းသိပေမဲ့ လက်ကလေးပြပြီး အဲဒီ နေရာကနေ ထွက်ခွာသွားတတ်တယ်.. သမီးကို သိပ်ဂရုစိုက်တဲ့သူမှန်း သိသာပါတယ်.. ကဲ ကိုယ့်ကို ဒီလောက် ဂရုစိုက်တဲ့လူ၊ ဒီလောက် ချစ်တဲ့သူ မင်းမှာရှိနေတာ မင်းလောက် ကံကောင်းတဲ့သူ ရှိဦးမလားကွယ်..” လို့ ပြန်ပြောလာပါတော့တယ်။
အော် တကယ်တမ်းတော့ မတ်ခ်ဟာ သူမကို သိပ်ချစ်ရှာပါလား ဆိုတာ သူမ နားလည်သွားရပါပြီ။ မတ်ခ်ဟာ သူမ ကိုယ်ကို အားကိုးတတ်လာအောင် ပြုစုလေ့ကျင့်ပေးပေမဲ့ သူ စိတ်မချနိုင်စွာနဲ့ သူမ မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး စောင့်ရှောင့်ပေးနေခဲ့တာလေ။ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့်ကျတဲ့မျက်ရည်တွေ ဆူဆန့်ပါးပြင်ပေါ် စီးကျလာခဲ့ပါတယ်.. သူမဟာ မတ်ခ်ကို အပြင်မှာ မမြင်နိုင်ပေမဲ့ သူမရဲ့ဘေးမှာ သူမခင်ပွန်းဟာ အမြဲတမ်း ရှိနေတယ်ဆိုတာ ခံစားနားလည် နိုင်ခဲ့ရပါပြီ.. သူမ ကံကောင်းပါတယ်.. အရမ်းကို ကံကောင်းတယ်လို့ ယုံကြည်မိပါပြီလေ။
မတ်ခ်ဟာ သူမကို အမြင်အာရုံထက် ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိ အစွမ်းထက်တဲ့ လှပတဲ့ အချစ် လက်ဆောင်လေး တစ်ခုပေးခဲ့တာပါ… အဲဒီအချစ်ရဲ့ လက်ဆောင် ဆိုတာကို ယုံကြည် လက်ခံဖို့အတွက် သူမ မမြင်နိုင်ပေမဲ့လဲ သိလိုက်နိုင်ပါပြီ.. ရင်ထဲကနေ ခံစားလို့ရပါပြီ.. ခုတော့လဲ သူမရဲ့ မဲမှောင်ပိန်းပိတ် နေတဲ့ ကမ္ဘာထဲကို မတ်ခ် ပေးတဲ့ အချစ်လက်ဆောင်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ လင်းလက်မှုတွေနဲ့ ထွန်းလင်း တောက်ပလို့ နေခဲ့ပါပြီ.. သူမ ဘာကိုမှ မမြင်ရပေမဲ့ မတ်ခ်ရဲ့ အကြင်နာမေတ္တာကြောင့် သူမရဲ့ ဘ၀လေးဟာ လင်းလက်နေရပါပြီလေ။ ဆူဆန့်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာတော့ သူမအပေါ် ထားတဲ့ မတ်ခ်ရဲ့ သစ္စာရှိခြင်း၊ စိတ်ရှည်သီးခံခြင်း၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်း တို့ကြောင့် ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်တဲ့ ပီတိမျက်ရည်တွေနဲ့ ပြည့်လို့…
A gift of Love ( Unknown Author)ကို ဘာသာပြန်ခံစား ရေးဖွဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်သွား တောလား - ၂
ကမ္ဘာကြီးကို အလှူကြီး ပေးလိုက်ပါ။
Education = Brighter Future